C/raxmaan Xaaji Aadan (Ibbi) oo ku guulaystay kursiga Aqalka Hoose – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
C/raxmaan Xaaji Aadan (Ibbi) oo ku guulaystay kursiga Aqalka Hoose
A warsame 22 November 2016 22 November 2016
C/raxmaan Xaaji Aadan (Ibbi) oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa ku guuleystay doorashada xubnaha aqalka hoose ee maamulka koonfur galbeed oo ka dhacday magaalada Baydhabo.
Prof. ayaa ka mid ahaa xildhibaanada baarlamanka Somalia illaa dowladii 2001-dii lagu soo dhisay Carta ee uu Madaxweynaha ka ahaa Dr. C/qaasim Salaad Xasan, isagoo xilal wasiirnimo ka soo qabtay dowladihii KMG ahaa.
Siyaasigan ayaa la sheegay inuu kursiga beeshiisa Dir/Gaadsan ku helay ka dib markii uu gacantiisa ku soo qortay musharaxii la tartamayey iyo ergadii beeshiisa ee dooratay, taasoo ah dhaqan cusub oo lagu arkay doorashooyinka dadban ee dalka ka socda.
Doorashadan oo ka dhacday magaalada Baydhabo ayaa ergadu u codeysay Prof. Ibbi keligiis, iyadoo aysan jirin cid la tartameysay ka dib markii sida la sheegay uu tanaasulay musharaxii la tartamayey oo markii horeba ahaa mid magacuyaal ah.
Doorashada xubnaha aqalka hoose ee maamulada Hirshabelle iyo Galmudug ayaa lagu wadaa iney maanta dib uga bilowdaan magaaloyinka Jowhar iyo Cadaado inkastoo weli murano iyo isqabqabsi beelaha qaarkood uu ka dhex aloosan yahay.
Madaxweyne xasan”dayntii soomaaliya waan bixi nay”